Karan Johar Oo Weerar Ku Qaaday Kangana Gaba Gabadii Barnaamijkiisii Koffee With Karan Season 5 - Hablaha Media Network
Karan Johar Oo Weerar Ku Qaaday Kangana Gaba Gabadii Barnaamijkiisii Koffee With Karan Season 5
HMN:- Filim sameeye Karan Johar iyo atirishada caanka ah Kangana Ranaut dagaal xoogan ayaa ka dhex qarxay dhawaan madaama Kangana ay Karan ku eedeesay inuu yahay shaqsi si qaraabonimo ah jilaayaasha Bollywood-ka ugu kala eexdo.
Karan Johar isagana wuxuu ugu jawaab celiyay inay tahay Kangana qof dadka oo dhan xag xagato sidoo kalena hadii ay dhibane tahay Bollywood-ka isaga baxdo madaama dhibkeeda ay qof walbo dusha kaga tuureyso!
Kangana wey usoo jawaab celisay waxayna Karan ku tilmaantay midka ugu liito kuwa ragga ah ee Bollywood-ka ku jiraan sidoo kalena uu dumarka u kala eexd, uuna yahay shaqsi nacas ah oo aan waligiis nolosha halgan u galay sidoo kalena aan lagu tilmaami karin mid wanaagsan dadkana u kala eexdo.
Hadaba Karan Johar oo xalay soo gaba gabeeyay barnaamijkiisii Koffee With Karan Season 5 ayaa weerar ku qaaday Kangana dagaal cusubna dib u bilaabay.
Markii la bixiyay abaal marinada kala duwan ee Koffee With Karan Season 5 oo ay jilaayaal kala duwan ku guuleestaan Karan wuxuu yiri “Xitaa ardeyda Varun, Alia iyo Siddharth bandhig wacan kama sameynin show-geygii, sidaa darteed sidee la iigu tilmaami karaa mid qaraabo ahaan dadka ugu kala eexdo marba caruurtii aan soo saaray hadii aysan caawo helin biladaha ugu badan!”
“Alia caawo bilad ah kuma guuleesanin, Siddharth sidoo kale isagana gudiga bilad ma siinin, halka Varun uu hal bilad ku guuleestay, sidaa darteed waxaan ahay qof cadaalada ku shaqeeyo”
“Waxaan la hadlaa kuwa aan waxba maqlin ee meel cidlo ah igala dagaalsan iguna xagliyaan inaan qaraabonimo dadka ugu kala eexdo!!!!”
Tolow Kangana Ranaut maxay ugu soo jawaab celin doontaa Karan Johar madaama si toos ah gaba gabadii barnaamijkii Koffee With Karan Season 5 xidigtaan hilfaha loogu qaaday…….